Sibheka Amathuluzi Esingawasebenzisa kuphela | Martech Zone
Lwesine, Disemba 23, 2010 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Leli sonto kube yisonto elinzima… ingcindezi eningi, ushintsho oluningi, futhi inqubekela phambili eningi. Eminyakeni engu-42 ubudala, ngizimisele kahle ezindleleni zami kodwa benginomcimbi kuleli sonto othe washaya kanzima.
Bengilokhu ngithi isikhathi eside ukuthi imithombo yezokuxhumana iyisikhulisi esimangalisayo - kepha ukuthi izinkampani ebezivele zisebenza emphakathini yizona zangempela ezisebenzisayo nezizuzayo ezinkundleni zokuxhumana. Izinkampani ezingezona ezenhlalo, noma eziphikisana nomphakathi, kaningi aziqapheli ukutshalwa kwezimali ezinkundleni zokuxhumana. Kungani bekungaba njalo? Abakaze bathole ukuthengiswa kwezimakethe noma ubuholi ngokuba ngumphakathi. Njengomphumela - njenge i-ejensi yezindaba entsha, sicindezela ezinye izinkampani ezinkundleni zokuxhumana… kepha ezinye sizicindezela kwamanye amasu wokuphromotha. Imithombo yezokuxhumana iyi hhayi kuwo wonke umuntu (uxolo gurus!).
Okufanayo kuya kubantu. Eminyakeni eyishumi edlule, ngikholwa ukuthi ngithuthukise inethiwekhi engenantengo yezinkampani, abantu nezinsizakusebenza. Ngizoyibiza ngeyami umcebo. Ngisebenze kanzima ekwakheni i- umcebo. Angizange ngiyithenge. Kuthathe iminyaka neminyaka yengcindezi engapheli. Lapho ngihlehla, yangcwatshwa. Lapho ngisebenza kanzima kuyo, ngabuyisa umcebo wami ngamasentimitha ngasikhathi. Ngesikhathi nesikhathi esiningi engisisebenzisile ekwakheni ingcebo yami, ngiyayazisa. Ayigugu. Inkampani yami yazalwa ngenxa yengcebo yami.
Angiyigcini kimi ingcebo yami. Uzobona lokhu nge-blog, inkampani, ihhovisi, amathuluzi, incwadi, imicimbi, izinhlelo zokusebenza, uhlelo lomsakazo… konke kuvulekele noma ngubani ongathanda ukuzisebenzisa. Ngenkathi ngivikela ingcebo yami, kepha angikaze ngiyifihle futhi ngiyigcine kimi. Kungani nginga? Ngifuna nabanye bazuze engcebweni yami.
Kepha abanye ngeke. Engikubonile ukuthi ngiyawazisa umcebo wami futhi ngiwubeka phezulu kakhulu ngoba ngiyakwazi ukwenza yisebenzise. Ngibona ukuthi kungenzeka futhi ngiyazi ukuthi kuyishintshe kanjani impilo yami. Ngiyazi ukuthi izongihlinzekela mina nanoma ngubani ongamsebenzisa it kahle. Uma othile engikhombisa igalaji labo elinamathuluzi abiza amashumi ezinkulungwane zamaRandi, mhlawumbe bengingaduma ikhanda ngiqhubeke nokuhamba. Ukube bebengumakhenikha, bebezoqonda ukuthi lelo bhokisi lamathuluzi lingabanikeza umsebenzi wokuphila nomsebenzi wokuphila konke. Angikwazi ukuyisebenzisa, ngakho angiyigugu.
Lapho othile eqaphela ukubaluleka kwengcebo yami, kuyamangalisa. Ngithole kuleli sonto ukuthi abanye bamane nje abakwazi, noma kunjalo! Gcina lokho engqondweni njengoba ukhuluma nezinkampani ngemithombo yezokuxhumana nokumaketha online. Uma izinkampani zikhula futhi zichuma ngaphandle kwazo, zona ayikwazi bona inani abangaletha ngalo. Uzodinga ukukufakazela lokho. Futhi ungahle ungakwazi.
Futhi gcina engqondweni nabantu… abanye abantu bazocabanga ukuthi inethiwekhi yakho nokuxhumana kwakho nomphakathi akuyona imali, bazocabanga ukuthi umosha isikhathi sakho. Kungazwakala kusobala, kepha we zama kuphela amathuluzi lokho we ukwazi we angasebenzisa.
Tags: izinhlelo zokusebenza zokumakethaipulatifomu yezentengisosoftware yokumakethaisofthiweAmathuluziInani
Dec 26, 2010 ngo-6: 45 PM
Yeka iposi elihle! Ngiyabonga.
Dec 28, 2010 ngo-9: 55 PM
Okuthunyelwe okuhle impela, uDoug. Izinto ezinhle ongacabanga ngazo…